Nhau - Yakatsanangurwa tsananguro yepamusoro-chaiyo michina yekununura mvura senge kure-inodzorwa-mvura inonunura marobhoti, emagetsi ehupenyu maboys, nezvimwe.
Tsananguro yakadzama yezvakakwira-chaiyo michina yekununura mvura senge kuregedza-inodzorwa mvura kununura marobhoti, emagetsi ehupenyu maburu, nezvimwe.
Njodzi dzemafashama imwe yenjodzi dzinongoitika dzega munyika medu. Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, vanhu vane zvakawanda zvinopesana. Huwandu hwedzimba dzakapunzika uye kufa nekuda kwemafashama munyika yangu kazhinji kuri kuderera. Kubva 2011, huwandu hwevanhu vakafa nekuda kwemafashama munyika yangu wanga uri pazasi pechiuru, izvo zvakare zvinoratidza kuti simba remafashama harirambidzike.
Musi waChikumi 22, 2020, mataundishipi ekuchamhembe kweTongzi County, Zunyi City, Guizhou Province akawana mvura yakasimba yedunhu. Mvura yakanyanya kunaya yakaitika mumatawuni matatu. Kunaya kwakanyanya kwakakonzera kuti mataundi akasiyana muTongzi County akanganisike kumatanho akasiyana. Zvinoenderana nekuferefetwa kwekutanga uye huwandu, vanhu vatatu vakaurayiwa uye 1 vakakuvara nekuda kwekudonha kwedzimba dzakakonzerwa nemafashama emvura. 10,513 vanhu vakaendeswa nechimbichimbi uye vanhu zviuru mazana mana nemakumi manomwe nenomwe vaida rubatsiro rwehupenyu hwechimbi-chimbi. Kupera kwemagetsi uye kukanganisa kweterevhizheni mune mamwe mataundi nemataundi zvakakonzera kurasikirwa kwakananga kwehupfumi kwe82.89 mamirioni yuan.
Kununura kwemvura chirongwa chekununura nekukasira kwakasimba, nguva yakamanikana, hunyanzvi hwehunyanzvi hunodiwa, kunetseka kwakanyanya kwekununura, uye njodzi huru. Vanonunura pavanopinda mukati merwizi kununura vanhu, vari panjodzi huru uye vanogona kurasikirwa nenguva yakanakisa yekuponesa vanhu. Iko hakuna zviratidzo zviri pachena zvekudonha pamusoro pemvura pamusoro. Vanowanzo fanirwa kutsvaga munzvimbo yakakura kwenguva yakareba kuti vawane munhu anonyura. Izvi zvinhu zvinowedzera zvipingamupinyi zvekununura mumvura.
Nhasi, kune akawanda marudzi emidziyo yekununura mvura pamusika, iine mabasa akawedzera uye mutengo wakakwira. Zvisinei, ichine zvimwe zvikanganiso zvisina kukundwa. Izvi zvinotevera zvimwe zvezvinetso zvemidziyo yekununura mvura pachayo:
1. Midziyo yekununura mvura inokandwa pamusoro pemvura kubva mungarava, kumahombekombe, kana nendege inogona kupidiguka. Mimwe midziyo yekununura mvura haina basa rekungobhururukira kumberi, izvo zvinononoka mabasa ekununura. Zvakare, kugona kurwisa mhepo nemafungu hakuna kunaka. Ukasangana nefungu rinodarika maviri metres, michina yekuponesa hupenyu inozotorwa mifananidzo iri pasi pemvura, izvo zvinogona kukonzera kurasikirwa nehupenyu nepfuma.
2. Paunenge uchiita kununura mvura, zvingangoita kuti zvinhu zvekunze zvakaita semiti yemvura, marara epurasitiki, nezvimwewo zvinogona kupinza vanhu vakasungwa kana michina inoponesa hupenyu. Mafambisi emimwe michina haashandise chifukidziro chakakosha chekudzivirira, chisingakwanise kudzivirira zvinhu zvekunze kuti zvisabatikane nevhudzi remunhu, izvo zvinowedzera njodzi dzakavanzika dzekununura
3. Mukutaura kwehunhu hwayo, masutu anonunura emvura aripo haana kunyaradzwa uye kushanduka, uye mabvi nemagokora haasimbiswi, izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwavo nekuneta kuve kushoma. Musoro wezipiri hauna kuiswa velcro yekugadzirisa zipi, izvo zviri nyore kutsvedza pasi kana zipi iri kushanda iri pasi pemvura. Panguva imwecheteyo, iyo zipi haina kugadzirirwa nehomwe ye zipi, izvo zvakaoma kupfeka.
Mvura kununura kure kudzora robhoti
ROV-48 isina kutsvakirwa yekutsvaga uye kununura ngarava idiki, iri kure-inoshanda, isina kudzika yekutsvaga kwemvura uye robhoti yekudzimisa moto. Inonyanya kushandiswa pakununura mvura mumatura, nzizi, mahombekombe, maferi, mafashama uye zvimwe zviitiko.
Pakazara mashandiro ekuita
1. Maximum kutaurirana kure: distance2500m
2. Kufambira mberi kwepamberi: ≥45km / h
Wireless kure kudzora akangwara simba lifebuoy
Iyo isina waya yekumusoro yekudzora yakangwara simba lifebuoy idiki diki yekununura robhoti iyo inogona kushandiswa kure. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumadziva ekushambira, madziva, nzizi, mabhishi, yachts, maferi, mafashama uye zvimwe zviitiko zvekudonha mvura kununura.
1. Zviyero: 101 * 89 * 17cm
2. Kurema: 12Kg
3. Kununura mutoro unokwanisa: 200Kg
4. Iyo yakanyanya kutaurirana kure ndeye 1000m
5. Kwete-mutoro kumhanya: 6m / s
6. Kumhanya kwevanhu: 2m / s
7. Yakaderera-inomhanya kutsungirira nguva: 45min
8. Remote control daro: 1.2Km
9. Kushanda nguva 30min
1. Iko goko rakagadzirwa neLLDPE zvinhu zvine yakanaka yekupfeka kuramba, kuputira magetsi, kuomarara uye kutonhora kuramba.
2.Kununura nekukurumidza mukati merwendo rwese: Kwete-mutoro kumhanya: 6m / s; Yakagadziriswa (80Kg) kumhanya: 2m / s.
3. Inotora pfuti-mhando kure kudzora, iyo inogona kuvhiyiwa neruoko rumwe, nyore kushandisa, uye inogona nenzira kwayo kure kudzora simba lifebuoy.
4. Ziva yekupedzisira-kure-kure kure kudzora pamusoro pe1.2Km.
5. Tsigira GPS yekumisikidza system, chaiyo-nguva yekumisa, nekukurumidza uye kwakanyanya kumisikidza.
6. Tsigira imwe-kiyi auto-dzokera kumba uye otomatiki-dzokera kumba kupfuura renji.
7. Inotsigira kutyaira-mativi maviri uye ine kugona kununura mumhepo hombe nemafungu.
8. Inotsigira kururamisa kwenjere kwenzira, uye mashandiro acho akanyatsojeka.
9.Propulsion nzira: Propeller propeller inogamuchirwa, uye redhiyo yekutenderera iri pasi pe1 mita.
10. Uchishandisa lithiamu bhatiri, iyo yakaderera-mhanya kutsungirira inopfuura 45min.
11. Yakabatanidzwa yakaderera bhatiri alarm alarm.
12. Mwenje wepamusoro-wekupinda chiratidzo cheyedza inogona kuona nyore kumira kwekuona usiku kana mune yakaipa mamiriro ekunze.
13. Dzivisa kukuvara kwechipiri: Mberi yekudzivirira-kurovera dziviriro tambo inodzivirira kukuvara kwekurovera kumuviri wemunhu panguva yekuenderera mberi.
14. Emergency kushandisa: 1 kiyi bhutsu, inokurumidza bhutsu, yakagadzirira kushandisa kana kuwira mumvura.